Malunga nathi - China Ningbo Cixi LGGB iibheringi Co., Ltd.
China China Ningbo Cixi LGGB iibheringi Co., Ltd. ibekwe Cixi Ningbo, Zhejiang Povince., na umenzi eneemfuno ezizodwa iibheringi.
I-LGGB inezothutho ezifanelekileyo, ibekwe kwibhanki esemazantsi yeHangzhou Bay, i-60 km kude ukusuka empuma ye-Ningbo, i-148 km ukusuka kumantla e-Shanghai, i-138 km kude nentshona ye-Hangzhou. , I-Hangzhou kunye ne-Ningbo, lolona qoqosho lwedolophu enkulu e-Hangzhou Bay, kwiphiko elisemazantsi yengingqi ye-Yangtze River Delta.
Siye sahluka kwimarike njengomthengisi ophendulayo, osebenzayo kumgangatho ophezulu, iimveliso ezinokuthenjwa kodwa ezingabizi kakhulu kwihlabathi liphela, kuMbindi Mpuma nakuMzantsi-mpuma Asia, eMzantsi Melika, eYurophu njalo njalo.
Abasebenzi bethu badume ngokuzinikela kunye nenqanaba lenkonzo yabathengi kolu shishino. Siqokelele inqanaba eliphezulu lobuchule bobunjineli kwaye sakha iZiko loLawulo loMgangatho elihambele phambili, injongo ikukuba iibheringi zethu zohlobo lwe-LGGB zibe nomgangatho olungileyo kunye nexabiso lokhuphiswano.Igama lethu kunye nokugxininisa kumgangatho kuthetha ukuba unoxolo lwengqondo ekusebenziseni iimveliso kunye namaxabiso ethu okhuphiswano asindisa iindleko ezininzi kuwe.
Sisoloko sidala ixabiso kubathengi!